Waa maxay Info-Lango? | Info-lango.fi
Info-Lango waa luqado badan oo lagu caawinaayo dadka.
Info-lango waxaad ka helysaa caawimaad tusaale, sida guryaha, shaqada, waxbarashada, wakhtiga firaaqada, iyo weliba su,aalaha la xiriira bulshada iyo caafimaadka. Talada waxaa lagu bixiyaa luqado badan oo kala duwan.
Adeegu waa bilaash u furan dhamaan.
: Adeega taageraha fog, waxa loola jeeda. in aad hesho talooyin sida
Waad wici kartaa la taliyaha luqadaada AMA Xili hore ballan waad qabsan kartaa. Haddii aad qabsatay waqti, talobixiyaha kuso wacayo waqtiga lagu heshiiyey.
Qaab video lagu so maraayo, Skype computerkaaga ama telefoonka smart
marka hore ballan qabso. Waxaad u baahan tahay inaad hesho qalabka Skype. Talobixiyaha asaga ku so diri doono dalab, Wakhtigii la ballamay, kaliya waxadaad u baahan tahay in aad riixdo qoralka, markaas waxaa la shekesan kartaa oo aad la hadli kartaa la taliyaashaada.